Faharefoana sy fampifanarahana | Fiaretana haran-dranomasina
Fiovan'ny toe-trandro marefo dia manondro ny habetsaky ny karazana, fonenana, vondrom-piarahamonina na tontolo voajanahary mety hampidi-doza amin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fanamafisana ny haran-dranomasina sy ny fiarahamonina olombelona miankina amin'izy ireo dia mitaky ny fahazoany ny fahalemen'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny faharetana dia mifamatotra akaiky amin'ny vulnerability; Ny faharetana dia voafaritra ho fahaizana rafitra iray hanamafisana ireo asany fototra sy ireo dingana eo anatrehan'ny adin-tsaina na fanerena amin'ny fanoherana na ny fanovana ny fanovana. ref
Adaptation strategies dia ny hetsika natao mba hanampiana ny vondrom-piarahamonina sy ny tontolo iainana hiatrika na hahasitrana ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fampiharana ny paikady fampifanarahana dia manampy amin'ny fanohanana ny fitomboan'ny faharetana sy ny fihenan'ny fahalemen'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana.
Ny risika mifandraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro dia mitaky fanovana amin'ny drafitra sy ny fitantanana ny fiarovana. Ohatra, ny fiovaovan'ny toetr'andro dia mety mitaky ny manampahaizana hanolo-tena hamerina mialoha ny tsindry hifantoka amin'ny paikady sy ny paikady hampiasaina handefasana azy. ref Ny fomba fananganana fiarovana amin'izao fotoana izao dia mety tsy ampy ho fiarovana ny tontolo iainana voajanahary sy ny tolotra omen'izy ireo rehefa mitombo ny fiovaovan'ny toetrandro ary mihamitombo, ary mety mila ampifanarahana amin'ny toerana, ny fotoana na ny fomba fiasa. Ireo fepetra amin'izao fotoana izao dia mila averina dinihana mba hampidirana ny fanovana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, na mety hila fanampiana vaovao. ref
Ny lalana amoron-dranomasina any amoron-dranomasina dia marefo amin'ny fiakaran'ny ranomasina. Sary © TNC
Ny fiheverana hoe inona no mahatonga ny politika mahomby na ny fomba fitantanana ny fitantanana dia mety hiova rehefa miharatsy ny toetrandro. Ny fomba fijery sasany izay heverina fa tsy ara-tsosialy na ara-bola ankehitriny, dia mety takiana amin'ny hoavy. Ohatra, ho setrin'ny fisondrotry ny ranomasina, ny planina ho an'ny fialana amin'ny fialana sy ny fialana amin'ny faritra amoron-dranomasina dia tsy azo nosorohana 20 taona lasa izay, fa tanterahina matetika any amin'ireo fanjakana amoron-dranomasina any Etazonia. ref Any amin'ny nosy kely mampiroborobo, ny adihevitra amin'ny vulnerability sy ny fitsinjaram-pahefana dia ilaina amin'izao fotoana izao mba hiantohana fa ny fandrindrana ny fiarovana sy ny fitantanana ny fitantanana dia manana vintana tsara indrindra hahomby.
Ny fitaovana sy ny fomba nofidiana ho fampiharana ny fanombanana ny fahombiazana dia miankina amin'ny tanjona sy ny fifantohana amin'ny fanombanana ny fahalemena sy ny fahafaha-manao. Ireo pejy manaraka dia manoritsoritra ny fitarihana ny fanamafisana ny fahamendrehana sy ny fitaovana maromaro hitantanana ny fampiharana.